Famatsiana herinaratra :: Mangataka ora roa amin’ny mpanjifa ny Jirama amin’izao CAN izao • AoRaha
Famatsiana herinaratra Mangataka ora roa amin’ny mpanjifa ny Jirama amin’izao CAN izao
Nametraka fandaminana sy fiaraha-miasa amin’ny mpanjifa ny orinasa Jirama. Mangataka ora roa amin’ireo mpampiasa herinaratra izy ireo mandritra ny lalao hoatrehin’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra na Barea, anio alina, mba tsy hampiasa fitaovana mahery vaika mila tanjaka herinaratra ambony.
« Miangavy ny orinasa Jirama mba hiara-hiasa sy hifampitsinjo amin’ny alaka­misy ho avy izao (Ndrl : anio). Raha mijery fahitalavitra isika ao an-tokantrano dia aoka mba tsy hampiasa lafaoro na ireo fitaovan-dakozia ireny, ohatra. Tena mampiakatra
be ny filàna mihitsy ireo. Miezaka hatrany amin’ny fanatsarana ny tolotra omena ny mpanjifa izahay satria tsy mijanona teo amin’ny fikara­karana tamin’iny lalao ampahavalon-dalana iny ihany, ny atao fa mitohy foana ny fana­tsarana », hoy Andriamampionona Tsitohery Francesca, talen’ny seraseran’ny orinasa Jirama.
Raha tsiahivina dia niakatra ambony be ny filàna teto Antananarivo. Nihoatra amin’ ny andavanandro ny zavatra nitranga ny alahady lasa teo nandritra ny lalaon’ny Barea.
Efa nampitomboina kosa ny mpiasa mpiandry raharaha, izay mipetraka eny amin’ireny toerana mety hisian’ny filatsahan’ny tanjaky ny herinaratra sy amin’ireo toerana be mpanjifa indrindra ireny.
Fitakiana tambin-karama :: Raikitra ny ambana fitokonan’ireo mpianatra ho mpitsabo eny amin’ny hopitaly